Calculator: Fungidzira Kuti Maonero Ako PaInternet Achakanganisa Sei Kutengesa | Martech Zone
Calculator iyi inopa inofungidzirwa kuwedzera kana kuderera mukutengesa zvichibva pahuwandu hweongororo dzakanaka, kuongororwa kwakaipa, uye kugadzirisa kuongororwa kwakaitwa nekambani yako online.
Verenga Yako Yakafanotaurwa Kutengesa Yakakanganiswa Ne Online Ongororo
Kuti uwane ruzivo rwekuti fomura yakagadzirwa sei, verenga pazasi:
Fomura Yekufungidzira Kuwedzera Kwekutengesa kubva kuOnline Ongororo
Trustpilot ndiwo B2B online online chikuva yekutora nekugovana veruzhinji kuongororwa kwevatengi vako pamhepo. Trustpilot yawana kuti kuyedza kwevatengi vavo kunoratidza kuwedzera mumitengo yekutendeuka kusvika ku60%. Muchokwadi, kuburikidza nekuwongorora kwevanopfuura zviuru zviviri zvevatengi, ivo vane nyanzvi yemasvomhu vanogadzira iyo chaiyo fomula yekuverenga iyo inogona kutengeswa yekuwedzera inosanganisirwa neyakanaka ongororo, isina kunaka kuongororwa, uye zvisina kunaka wongororo dzakagadziriswa.
Trustpilot yaida kuongorora kuti ongororo dzakakanganisa sei kutengesa, saka dzakabatana nevakakurumbira Cambridge University masvomhu, William Hartston, kugadzira fomula yekuverenga kukosheswa kwehupfumi hwekuwongorora online pamabhizinesi eUK. Iyo fomula iri seinotevera:
V = Percent kuwedzera kwemari kune rako bhizinesi nekuda kwekutarisa online
P = Huwandu hweongororo dzakanaka
N = Huwandu hweongororo dzisina kunaka
R = Huwandu hwekugutsikana hwakagadziriswa zvisina kunaka kuongororwa
Heino pfupiso vhidhiyo inotaura nezve mabhenefiti e online ongororo:
Kuvimbika kwevatengi chikamu chakakosha cheanenge ese marongero ekushambadzira, asi pasina ako ekupedzisira-vashandisi zvipupuriro zvakagovaniswa online kuitira kuti tarisiro inogona kutsvagurudza nekubatana zvakananga nevatengi, chirongwa chako chekuvimbika kwevatengi hachina kukwana. Kushandisa chikuva chekushongedza muunganidzwa, kubatanidza, uye kusimudzira kwevatengi wongororo kwakakosha kune mabhizinesi anotengesa online.
Yasvika nguva yezviratidzo kumira kutya kuongororwa kwepamhepo uye kutanga kunzwisisa simba rechokwadi revatengi mhinduro. Ongororo dzepamhepo dzinoita kuti vatengi vanzwe vachikosheswa uye nekunzwa, uye mabhizinesi anoona akasiyana, anooneka misiyano muRIO, mari, kuchengetedzwa kwevatengi, uye tinya-kuburikidza nemitengo. Kana bhizinesi rako risati raita zvakadaro, ndiyo nguva yacho.
Jan Vels Jensen, CMO weTrustpilot
Ongororo dzepamhepo zvinowedzera traffic, kutengesa, saizi yengoro, uye kunoderedza kusiiwa kwengoro.
Dhawunirodha Rinokosha Basa Rezve Ongororo MuInternet Trust
Tags: karukuretakuvimbika kwemutengimutengi kuvimbika kushambadzirakuchengetwa kwevatengikuongorora kwevatengiwedzera kutengesa onlineonline Calculatoronline ongororo muunganidzwaonline ongororo chikuvaOngororo dzepamhepomungoro yekutengeratrustpilot